Travel Myanmar Blog - City guide and travel tips
Soe Darli | August 18, 2017
လူတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်ပတ်စရာ တွေ ပေါများ ကြောင်းနှင့် နိုင်ငံ ဟာ ဘယ်လောက်လှပ ကြောင်း ပြောလေ့ရှိပါတယ်။ တကယ်တော့မြန်မာ နိုင် ငံ က ဒီထက်ပိုပြီး offer လုပ်စရာ တွေရှိပါတယ်။ အဲဒါက...
Soe Darli | August 16, 2017
ရန်ကုန်မှာ ခေတ်ရေစီးကြောင်းနဲ့အညီ လျှောက်လည်ရအောင်
Groupလိုက်Game ကစားရတာကိုကြိုက်နှစ်သက်ပါသလား? Challenging ဖြစ်တဲ့ puzzles တွေကိုဖြေရှင်း ရတာကိုရောကြိုက်နှစ်သက်ပါသလား? ကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ အခုပြောပြမယ့် နေရာတွေကိုတစ်ခေါက်လောက်တော့ သွားကြည့်သင့်ပါတယ်။ House Rules Cafe မိသားစု (သို့) သူငယ်ချင်းတွေ နဲ့...
ပုဂံကိုမိုးတွင်း မှာဘာလို့ သွားလည်သင့်လဲ
လူတိုင်းပုဂံကိုသိပါလိမ့်မယ်။ ၁၁ ရာစု ၁၂ ရာစု လောက်ကထဲကတည်ရှိခဲ့တဲ့ ထောင်ကျော်တဲ့ ဘုရားစေတီပုထိုးတွေတည်ရှိတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုမြို့ကိုပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ပုဂံကို မိုးရာသီမှာ သွားလည်လို့ အဆင်ပြေဆုံးဆိုတာသိပါသလား? ဘာဖြစ်လို့ပုဂံကို မိုးရာသီမှာ သွားလည်လို့...
Jovago | August 4, 2017
ကမ္ဘာ အံ့ဖွယ်များတွင် တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သော ပုဂံမြို့သည် မြန်မာ့သမိုင်းတွင် ပထမဦးဆုံး လူမှုအဖွဲ့အစည်းပေါ်ပေါက်လာသော နေရာဖြစ်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာစတင် ထွန်းကားသောနေရာလည်းဖြစ်သည်။ မန္တလေးတိုင်းတွင် တည် ရှိပြီး မြန်မာလူမျိုးတို့၏ ဂုဏ်ဖြစ်သည်။ ပထမမြန်မာနိုင်ငံတော်ဖြစ်သည့် အလျောက် ပုဂံသည်...
Jovago | July 29, 2017
ကမ္ဘာ့ထင်ရှားတဲ့ ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှူမြို့တော် ပုဂံမြို့ဟာ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း မှာတည်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ ၁၁ ရာစုကနေ ၁၃ ရာစုနှစ်အတွင်းက တည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့ ထောင်ပေါင်းများစွာသော ရှေဟောင်း ဘုရားတွေနဲ့ပုဂံဟာ ဗုဒ္ဒဘာသာစတင်ထွန်း ကားတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပုဂံရောက်ရင် သင်မဖြစ်မ...
Jovago | July 21, 2017
နေပြည်တော်ဟာ ပျင်းမနားမြို့အနီးမှာတည်ရှိပြီး ရန်ကုန်နဲ့အစားထိုးသတ်မှတ်ခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ မြို့တော်ပါ။ ရန်ကုန်ရဲ့ ကားကျပ်ကျပ်တွေအဝေးကနေ ခဏတာထွက်သွားချင်တဲ့သူတွေအတွက် ငါးနာရီလောက်သာ ကားမောင်းရတဲ့ နေပြည်တော်ကို လမ်းညွှန်ပေးပါရစေ။ နေပြည်တော်ရေပန်းဥယျာဉ် နေပြည်တော် ရောက်ရင် ၀င်သင့်တဲ့နေရာကတော့ ရေပန်းဥယျာဉ်ပါ။ ၁၆၅...
Jovago | July 14, 2017
တနေ့ တနေ့ ပန်းခြံသွားလိုက်၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်လိုက်နဲ့ ပျင်းလာရော။ ရန်ကုန်မှာ ကစားကွင်းတွေ လည်း အများကြီးမရှိသေးဘူး။ ဒါပေမယ့် အားလပ်ရက် သူငယ်ချင်း၊ မိသားစုနဲ့အတူတူ ကစားကွင်းသွားပြီး စိတ်လွတ်လက်လွတ်အပန်းဖြေချင်သူတွေအတွက် သွားသင့်တဲ့ ရန်ကုန်ကအကောင်းဆုံးကစားကွင်းအချို့ကို လမ်းညွှန်ပေးလိုက်ပါတယ်။...
Jovago | July 12, 2017
ရန်ကုန်ဟာ နာမည်ကျော်ရှေးဟောင်းဘုရား၊ သမိုင်းဝင်အဆောက်အဦးတွေ၊ယဉ်ကျေးမှုပြတိုက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့မြို့ပါ။ဒါကြောင့် ဒီတခါမှာတော့ Jovago ပုရိတ်သတ်တွေအတွက် စိတ်ဝင်စားစရာတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့ ရန်ကုန်ကသမိုင်းဝင်ပြတိုက်တွေဆီကို ခေါ်ဆောင်သွားမှာပါ။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပြတိုက် ရန်ကုန်က ပြတိုက်တွေအကြောင်းပြောရင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပြတိုက်မပါဘဲပြည့်စုံမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဗဟန်းမြို့နယ်မှာတည်ရှိပါတယ်။ မြန်မာပြည်ရဲ့လွတ်လပ်ရေးဖခင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ ၁၉၆၂ ခုနှစ်မှာဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလုပ်ကြံမခံရခင်...